Mogadishu Journal » Xaalad degenaasho oo ka jirta Afgooye kaddib dagaal xalay halkaa ka dhacay
Mjournal :–Xaalada Degmada Afgooye ee Gobolka Sh/Hoose ayaa dagen kadib markii ay xalay fiidkii Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar Ciidanka Dowlada oo fariisin halkaasi ku lahaa.
Saraakiisha Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay soo weerareen qeybo ka mid ah Degmada Afgooye ee G/Sh/Hoose.
Taliyaha Ciidamada Booliska Afgooye C.qadir Cusmaan Nuunow ayaa sheegay in Shabaab ay weerareen meel banaanka ka ah Degmada.
Waxaa uu tilmaamay inaysan jirin, in Al-Shabaab ay gudaha usoo galeen Afgooye, isagoona sheegay in ciidamada dowladda ay ka hortageen weerarkaasi.
Taliye Nuunow ayaa xusay in weerarkaasi aysan jirin khasaare uu geystay marka laga reebo in dad shacab ah ay soo gaareen dhaawacyo fudud.
Al-Shabaab ayaa baraha ay ku faafiyaan wararkooda waxa ay ku sheegeen inay gudaha galeen degmada Afgooye, islamarkaana ay gacanta ku dhigeen halkii ay weerareen, mudo kooban, inkastoo uu taliyaha ciidanka Booliska Afgooye uu arintaasi beeniyay.